Apple iphone 7 batterie original China Manufacturer
Description:Original IPhone 7 Battery Repair,Li-polymer IPhone 7 Battery Original,IPhone anatiny 7 Battery
Home > Products > Batterie IPhone > IPhone 7 Battery > Apple iphone 7 batterie original
Ho an'ny famolavolana matihanina ho an'ny batterie iPhone mihoatra ny 8 taona, HQQN dia feno sy mifaninana amin'ny kalita sy ny vidiny. Ny pilina iPhone rehetra dia ho ambany noho ny kalitao miaraka amin'ny milina mba hahazoana antoka fa ny singa tsirairay dia mahafeno fepetra, manome antoka isika fa ny batterie rehetra dia tena feno sy mahomby capacity.The tahan'ny ny iPhone bateria dia hitandrina ny 80% taorian'ny 500 tsingerin'ny fotoana, dia nanao fandaharana izahay fitiliana alohan'ny maro misafidy finday bateria sela mpamatsy, ny daty no zava-misy, dia hizaha toetra amin'ny asa Mpamantatra nandritra ny 3 volana. Ankoatr'izay, ny batterie rehetra amin'ny iPhone dia miaraka amin'ny ii Ti chip fa tsy kilalao kely ambany, Ti chip dia manao fahombiazana matanjaka na dia eo amin'ny fanavaozana ISO aza, fa ny hafa rehetra dia mety manana olana. Manana teknolojia simika miaraka amin'ny batterie iPhone niaviana , tsy misy ny batterie finday olana ara-pahasalamana.
HQQNUO dia miasa amin'ny karazana finday maro toy ny iphone Battery, batteries batteries iphone , Huawei Battery , Samsung batterie sy ny hafa Accessories ho an'ny finday toy ny trondro iphone , Huawei Charger Case , Samsung Charger Case , Wireless fiara fiara sy ny sisa, OEM / ODM sy endri-panamboarana marobe no manohana antsika.
Fiatrehana ora: 3 ora
Fitaovana ho an'ny andro lava iPhone 7 finday
Ny fahaiza-manao tanteraka dia 1960 mAh, izay mitovy amin'ny original.100% mifanentana amin'ny findainao, azonao antoka fa tsara ny miasa.
Q1.Ary orinasa orinasa orinasa ve ianao?
Ny A1.we dia 1000sqm varotra ary mpiasa maherin'ny 1 00 miaraka amin'ny famokarana herinaratra 5.
Q2.Do manana Battery ve ianao?
A2.Yes, manana Battery an-trano izahay.
Q3.Isa io pilina io miaraka amin'ny tsingerina 0?
A3.YES, ny vokatra rehetra dia 0 cycle. AAA madio fitomboan'ny kobalta amin'ny vovony.
Q4.Do manana solosaina finday hafa, toy ny Samsung, Huawei, sns.
A4.Sorry, Pilotra iPh Azo alaina ihany ary manan-karena amin'ny traikefa isika nandritra ny 12 taona tamin'ny taona 2006.
Q5. Azo atao ve ny manao fepetra kely mba hitsapana ny kalitaonao?
A5.YES, Sample ny 3-5 dia misy ary ny order minimum minimax dia 50pcs.
Product Categories : Batterie IPhone > IPhone 7 Battery
New iPhone 7 Fandefasana batterie ho an'ny fakantsarin'ny iPhone Contact Now
Get a New Apple Iphone 7 Resadresaka Contact Now
Fivarotana varimbazaha am-poloney apelin'ny liona Contact Now
Ahoana ny fanoloana ny battera iPhone 7 Contact Now
iphone 7 charger batteries best price Contact Now
Apple iphone 7 batterie original Contact Now
Original IPhone 7 Battery Repair Li-polymer IPhone 7 Battery Original IPhone anatiny 7 Battery IPhone 8 Battery Repair Original Samsung A8 Battery Repair New IPhone 5 Battery Repair IPhone6sp Battery Repair Apple Iphone Battery Repair